Phenylpriracetam (Carphedon) powder (77472-70-9) ≥98% | Vachigadzira
/ Products / Nootropics powder / Phenylpiracetam (Carphedon) upfu
Rating: SKU: 77472-70-9. Category: Nootropics powder
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva pa gram kusvika kuhutano hwePhenylpriracetam (Carphedon) powder (77472-70-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Name: Phenylpiracetam (Carphedon) powder
Molecular Kurema: 218.25
Color: Muchena kana kuti upi pfupa chena
Phenylpiracetam (Carphedon) poda mune steroid cycle
Phenylpiracetam powder, Phenotropil powder, Carphedon powder
phenylpiracetam powder Ushumiri:
Chimwe chiitiko che phenylpiracetam powderranges kubva ku 100-200 mg pamushandi, inotorwa kusvika katatu pazuva. Pamusana pemigumisiro yaro yakasimba, inokurudzirwa kutanga pamucheto wezasi wezera rekuyera uye zvichiwedzera kana zvichidikanwa.
Kutsungirira ku phenylpiracetam powder kunonzi kunokurumidza kukurumidza. Nokudaro, hazvikurudzirwi kuitora sekuwedzera kwemazuva ose asi pane shanduro yekuwedzera mano ako kana iwe uchida iyo yakawanda kana kuti kuifambisa nguva nenguva.
Nyaya inonyanya kushungurudzika inokonzerwa nehutano inokonzera kukonzera kushushikana, kuzvidya mwoyo uye kusagadzikana pane imwe nzvimbo. Kunyange zvazvo Carphedon powder inogona kukonzera migumisiro iyi, ivo havakwanisi kunyanya kuwedzera kune izvo zvinokurudzira. Carphedon powder kana Phenylpiracetam powder zvinowedzera zvinogona kuwedzera kusvinura uye kuwedzera kukwanisa kwekuziva nehuwandu hwemigumisiro uye ngozi shoma kudarika mamwe akawanda anokurudzira.
Carphedon powder uye Oxiracetam inonzi inhengo mbiri dzinokurudzira dzemhuri ye racetam uye zvose zviri zviviri zvingasarudzwa kana iwe uchida kuwedzera kuchenjerera kwako.
Ndezvipi Zvimwe Zviitiko Ndinofanira Kutarisira kubva Phenylpiracetam Poda?
Phenylpiracetam powder ndeimwe yeootropic inonyanya kuwanikwa pamusika nhasi. Icho chinhu chinoshandiswa neotropic kubva kumhuri ye racetam uye inoshandurwa shanduro yepakutanga piracetam yekotopic, kunze kweiyo inofungidzirwa kuva 30 kusvika nguva 60 inopfuura simba, inoshandiswa neuroprotective properties, uye inowedzera kushanda mumuviri. Nokuda kwezvikonzero izvi zvose, phenylpiracetam powder iri kukurumidza kuwanzana pakati pevashandisi vemaNootropic.
Yakagadzirwa, phenylpiracetam powder inonyanya piracetam ne phenyl boka rakaiswa pairi. Izvozvo zvinoita kuti zvive zvakangofanana ne piracetam, mubereki wayo murolekemu, asi kuwedzerwa kweboka re phenyl rinokurudzira iri munzira mbiri dzinotevera:
1. Zvimwe Zvakakosha - Kuwedzerwa simba uye kuwedzera simba kuburikidza nekubvumira mamolekari kudarika uropi-nharo yeropa (BBB) ​​nyore.
2. Kusimbisa - Zvimwe zvinokonzera zvinokonzerwa nekuenzaniswa zvakanyanya nezvinhu zve phenethylamine, zvakadai seAdderall.
Mukuenzanisa nedzimwe marcetams, phenylpiracetam powder yakanyatsonaka uye ine yakakwirira bioavailability kunyange kana yakagadzirwa nemuromo. Hupenyu hwayo hupenyu hwakapoteredza nguva 3-5 kuvanhu.
Yambiro pa (Carphedon powder) Phenylpiracetam powder:
Kufanana nemamwe nootropics mukirasi ra raetetam, kune vashomanana vanotaurwa nemigumisiro kubva pakuwedzera feriylpiracetam powder pazvinotorwa pamatare anofungidzirwa. Kana iwe uine hutano hwemusoro, zvinogona kuva chiratidzo chokuti iwe unofanira kuwedzera kana kuwedzera yako choline supplementation, iyo inowanzokurudzirwa paunotora marcetams.
Phenylpiracetam powder inowedzera chiyeuchidzo uye zvakakwana kugadziriswa zvakanakisisa kupfuura piracetam, inodzivirira uropi, uye yakataurwa kuti iwedzere kubudirira kwekuita. Phenylpiracetam powder ndeyekuwedzera kukuru kune chero nhengo ye nootropic inokonzerwa nemigumisiro yayo uye yakasimba. Kunyanya, vatambi nevadzidzi vanogona kubatsirwa zvakanyanya pamusana pemagariro ayo anokurudzira uye anokurudzira. Pasingatauri, inopa kukura kwekuwedzera kudzvinyirira iyo ibhonasi inokosha.
Phenylpiracetam powder yakatove yakapiwa masoja eRussia nevashambadziri pakukwanisa kwayo kusimbisa kushanda kwepfungwa nemuviri.
Mukuongorora, phenylpiracetam powder yakaratidza zvinotevera.
Kuvandudza chiyeuchidzo, kutarisa-kuchinja, uye unyanzvi hwokugadzirisa zvinetso kune varwere vane asthenia.
Wedzerai zvinokurudzira uye zvinopesana nemishonga uye kuvandudza mhemberero mumakonzo.
Kuratidzwa kudzivirira uye kuderedza migumisiro yeAmnesia.
Simba rekudzivisa kushungurudzika uye kutya kwekutya mumakumbo uye inokonzerwa nekudzivirira muviri.
Yakapiwa kugadzirisa migumisiro yekurara kwekurara kwehuwandu hwemigumisiro yevashandi vakawanda.
Inogadzirisa migumisiro yechando pamuviri wedu nekuwedzera kushivirira kweiyo.
Zvakanakira phenylpiracetam powder zvinonyanya kukosha pakudzidza nekudzidza. Chimiro chayo chinokurudzira chakanaka kune imwe nguva yekurara yakarambidzwa kambani yepram, kubatsira kwekutanga kwekutsvaga, kana kungowanzoziva kugadzirisa zvidzidzo. Migumisiro yaro pamusoro yekuyeuka inobvumira kushandiswa kwakakwana kwekuchengetedza. Kukurudzirwa uye kukurudzirwa kwemafungiro kunobvumira kuti zvidzidzo zvepamusoro zvive zvakanaka zvakare. Pakupedzisira, kukwanisa kwayo kugadzirisa migumisiro yekudzvinyirira nekuzvidya mwoyo kunofanira kubvumira kudzidza zviri nani pasi pezvinetso.
Phenylpiracetam powder zvakare yakakosha pakushanda uye kusimbisa mitambo. Inogadzirisa migumisiro yakaipa yekudzvinyirira pamuviri wako, iyo inokosha kune mumwe mutambi, kuwedzera simba, kupora, nekutsungirira. Izvi zvinowedzera kushivirira kudzvinyirira zvinosanganisira kuwedzera kushivirira kwemuviri wako kunotonhora.
Phenylpiracetam powder inopawo simba rakafanana neyomuamphetamine. Kuchena, kuisa pfungwa, kukurudzira simba pasina caffeine jitters yakakosha mukemhi kuti ubatsire kushanda kwako panguva yekushanda kana makwikwi. Ikokowo pane zvishoma zvisingakanganisi, kunyange kana zvichienzaniswa ne caffeine.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinofanira kuona kuti phenylpiracetam powder iri paNyika Anti-Doping inorambidzwa zvinhu zvinorambidzwa uye inofanira kusarudza pane phenylpiracetam powder supplementation saizvozvo.
Chimiro chaCarphedon chinonyanya kufanana nePiracetam uye zvose zviri zviviri zvinoda kusvika 100% zvingabhadharwa kana zvichitorwa nemuromo uye zvakafanana hafu yeupenyu. Saka sei Carphedon (Phenylpiracetam) powder inofungidzirwa kuti inoshandiswa piracetam?
Carphedon powder inofungidzirwa kunge yakawanda nguva 60 inopfuura simba kupfuura piracetam, zvinoreva kuti zvinotora zvakanyanya kudarika Carphedon powder kuona zvigumisiro. Izvi hazvirevi kuti kutora madhigiri akakwirira ePiracetam kuchapa mhinduro yakafanana neCardondon powder. Kutaura zvazviri, kutora Piracetam yakawanda kunopa maitiro ekuderera mushure meimwe pfungwa, asi ichawedzera mikana yokuti iwe uchava nemigumisiro.
Iyo phenyl boka yakawedzera kuPiracetam kugadzira Carphedon powder inobvumira kuti ive nehuwandu hwemigumisiro yehupenyu uye inoita kuti ibudirire pakugadzirisa kuisa pfungwa nekuvandudza kupindura nguva.
Zvakaoma kuenzanidza Carphedon powder neNoopept nokuti zviviri zvinhu zvakasiyana zvakasiyana nezvimwe zvavanoita uye zvakashata. Zvinonyatsoenderana nehupi hwehupi hwemakemikari uye kuti hunokubata sei.
Noopept inonzi inonzi 1,000 nguva inopfuura simba kupfuura Piracetam, kusiyana nemafuta eCarphedon 60 times. Izvi zvinongoreva kuti zvinotora zvishoma kuti zvive nemigumisiro, asi kana isina michero yauri kutsvaga, hazvina basa kuti yakanyanya sei.
Noopept uye Carphedon powder vose vane mikana yekutsungirira kunovaka. Izvozvi hazvina kuve nekuongororwa kwakawanda kuenzanisa zvinhu zviviri, saka zvakaoma kutora mhedziso yekutenderera kune zviri nani.
Pano pane nootropic zvinhu zvinogona kuenzaniswa. Imwe inonyatsozivikanwa sekutsvakurudza nootropic, imwe iyo kunyanya kuisa pfungwa yekuwedzera. Zvose izvi zvinonyatsozivikanwa pakati pevashandi veo nootropics uye zvose zviri zviviri kune rumwe rutivi runodhura.
Mushandisi wemashoko eKalphedon powder uye Phenylpiracetam's powder effect inosiyana zvikuru. Vamwe vashandisi vanoshuma vachiona zvikomborero zvine simba Mimwe mitsara yemashandisi inoti haina zvishoma kana kuti zvakanyanya kuipa, kuti inovasiya vachineta uye kufunga kwavo kufara. Tarisa mutungamiri wedu wakakwana munzira yakanakisisa yekutora Phenylpiracetam powder.
Vashandi veCarphedon powder vanoita sevari kuvaka kuvhiringidzika panzvimbo pfupi, mune dzimwe nguva mumazuva mashoma. Kubva pamishumo, zvinotora nguva yakareba sei kuvakira kushivirira kunoratidzika kunge kusingazivikanwi. Zvinonyanya kuitika kuti chikamu chechikonzero chekusiyana mumishumo yevashandi ndeyekuti vamwe vatengesi vari kutengesa mhaka yeCardondon powder.
Pramiracetam, kune rumwe rutivi, rinoratidzika kupa vashandi zvinowedzera zvivimbiso zvizere. Pramiracetam yakagadzirwa makore asati apfuura Carphedon powder uye akazviratidza pachake pakati peanotropics. Zvechokwadi, dzimwe dzenyaya neCardondon powder dzingangodaro nokuda kwekugovera zvinhu. Iye zvino kuti vamwe vanhu vari kuve vanoziva uye vachikumbira, vakawanda vanoremekedzwa neotropic vatengesi vari kutanga kutakura.
Ipa zvose Carphedon powder uye Pramiracetam kuedza, kungoita kuti unenge uchitenga kubva kune mumwe muparidzi anoyemekedzwa kuitira kuti uzive kuti uri kuwana unhu hwepamusoro. Iwe unogona kugumisa kusarudza imwe kune imwe, kana iwe ungaguma usingashandisi mabhirikoro pakati pezviviri kuti usasimbise kushivirira. Tsvaga chikwata chakanaka kukupa mitsva yaunoda.
Nzira yekutenga Carphedon powder: kutenga Phenylpiracetam powder kubva kuAASraw?